CHAN 2020: Intermediate Lions keep host record | KICK442
CHAN 2020: Intermediate Lions keep host record
Once more history has been kept by the Intermediate Lions of Cameroon during the African Nations Championship opener.
As has been the case, all but one opener games have been won by host nations of the biennial continental football tournament but for its inaugural edition in Ivory Coast 2009, where Ivory Coast was beaten by Zambia
Coach Martin Ndtoungou Mpile and boys recorded a 1#0 victory over the warriors of Zimbabwe, Saturday January 16, 2021 at the Ahmadou Ahidjo Stadium. Both sides went on locker heads seeking for a smooth trend in Group A.
History holds that only Ivory Coast has lost an opener which was against Zambia in 2009. The Chipolopolos whitewashed the elephants 3-0, but Tunisia emerged victorious during that edition.
Reasons why pundits are wondering if Cameroon’s Intermediate lions will let another country raise the trophy after a remarkable start of the tournament on home soil
Complete list of CHAN openers and scores
2009: Ivory Coast 0-3 Zambia
2011: Sudan 1-0 Gabon
2014: South Africa 3-1 Mozambique
2016: Rwanda 1-0 Ivory Coast
2018: Morocco 4-0 Mauritania
2021: Cameroon 1:0 Zimbabwe
Morocco remains the only host nation so far that has ever hosted and became champions, 2018 beating Nigeria 4-0.
Ako Assomo wins MOTM in Cameroon’s win against Zimbabwe